I-OPPO Reno: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
Kwezi veki bekukho amarhe aneleyo malunga noluhlu lwe-OPPO Reno. Uphawu lwaseTshayina lunalo kubhaliswe iimodeli ezahlukeneyo eYurophu. Inkcazo esemthethweni e-China ibibanjwe namhlanje nge-10 ka-Epreli. Nangona izakuba sekupheleni kwale nyanga xa umboniso we efanayo eYurophu. Kodwa sele siyazi ukuba yintoni uphawu olusishiyayo kule nkalo, kuba intetho yayo ibibanjelwe e-China.
Ke le Reno OPPO sele isemthethweni. I-smartphone apho uphawu luyothusa kakhulu. Kuba asinayo inotshi okanye umngxunya kwiscreen. Akukho nekhamera eslingelayo emayisetyenziswe. Kodwa sifumana uhlobo lokugqibela, apho ikhamera yangaphambili yefowuni ifihliwe khona.
Uyilo yeyona nto inomdla kakhulu. Kuba babheja kwinto eyahlukileyo ngokupheleleyo kule siyibonayo ezivenkileni namhlanje. Ke iya kuvelisa inzala evela kubathengi. Kwinqanaba lobugcisa, le smartphone ifikelela kwinqanaba eliphakathi kwinqanaba le-Android.
1 Ukucaciswa kwe-OPPO Reno
Ukucaciswa kwe-OPPO Reno
Le OPPO Reno iboniswa njenge-smartphone enomdla kakhulu kweli candelo lentengiso. Uyilo lotshintsho oluchaziweyo, ukucaciswa okuhle ngokubanzi, kuthathelwa ingqalelo iikhamera, ukongeza kwixabiso elifanelekileyo lemali. Iyahambelana nemiba emininzi ebalulekileyo kubathengi. Oku kukucaciswa kwayo:
Isikrini: I-6,4-intshi ye-AMOLED enesisombululo esingu-2340 x 1080 (402 dpi) kunye neCorning Gorilla Glass 6
Inkqubo: Snapdragon 710
Ukugcina ngaphakathi: 128/256 GB
Cámara traseraI-Sony IMX586 48 MP nge-f / 1.7 + 5 MP nge-f / 2.4
Ibhetri: 3765 mAh ngentlawulelo ekhawulezileyo ye-VOOC Flash Ukutshaja 3.0
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9 Pie enombala we-OS 6
ConectividadI-SIM ezimbini, iBluetooth 5.0, 4G / LTE, iWiFi 802.11 a / c, i-USB-C, i-minijack
abanye: Isivamvo somnwe weminwe esikrinini, ukuqondwa kobuso, i-NFC
UbukhuluUbukhulu: 156,6 x 74,3 x 9 mm
U bunzima: Iigram ezili-185
I-OPPO ifune ukubonelela ngento entsha kubathengi. Ngale ndlela, siyabona ukuba ikhamera yangaphambili efowunini iya kutyhileka ngolu hlobo, engile. Endaweni yokubheja kwinkqubo yemveli, njengoko sibona kwezinye iimveliso, inkampani ifuna ukunika into entsha neyahlukileyo. Ke le nto yokubheja kufuneka ixatyisiwe. Ikhamera yangaphambili ye-16 MP esiyifumana kwisixhobo.
Iikhamera zangasemva zimbini kule meko. Ngokungafaniyo nezinye iimodeli zodidi oluphakathi, apho sele sibona khona iikhamera ezintathu, le Reno OPPO isishiya sinenzwa kabini. Ngelixa eyona sensor iphambili yi-586 MP ye-Sony MIX48. Sesinye sezona zivamvo zibalaseleyo esizifumana kwintengiso yanamhlanje. Ke ukufota kuya kuba yindawo eyomeleleyo kwifowuni.
Kuba iprosesa isetyenzisiwe Snapdragon 710, yeyiphi iprosesa engabalulekanga ngaphakathi kwepremiyamu ekumgangatho ophakathi kwi-Android. Iyaqhubeka nokuba njalo nangona ifemu sele isungule umntu oza kungena ezihlangwini zayo. Yintoni egqithisile, izalisekisiwe ngokuhluzwa kutshanje, apho ukwahluka kwefowuni kunye nale processor kubonwe. Kunye neprosesa sinokudibanisa ezimbini ze-RAM kunye nokugcinwa. Yintoni egqithisile, iza nebhetri ye-3.765 mAh, esele ithembisa ukuzimela okuhle. Ingakumbi ngokudibeneyo neprosesa. Kukho inkxaso yokutshaja ngokukhawuleza kwebrendi kule Oeno Reno
Ukuza kuthi ga ngoku le yinkcazo yayo e China. Ekupheleni kwale nyanga siza kuba nakho ukudibana nale Reno ye-OPPO ngokusesikweni eYurophu, kumsitho ekulindeleke ubanjelwe eZurich. Ke sinokubona amaxabiso kunye nomhla wokuqaliswa kolu luhlu eYurophu. Nangona okwangoku sinamaxabiso abo eTshayina, asivumela ukuba sifumane umbono wokuba silindele ntoni kwifowuni.
Kukho iinguqulelo ezininzi kuxhomekeke kwi-RAM kunye nokugcinwa kwakho, njengoko sele sibonile. Amaxabiso eziza kuba nawo iinguqulelo ze-OPPO Reno zezi:
I-6/128 GB: i-2.999 yuan, malunga ne-397 euro yokutshintsha
I-6/256 GB: i-3.299 yuan, malunga ne-435 ye-euro yokutshintsha
I-8/256 GB: 3.599 yuan, malunga ne-475 euros yokutshintsha
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OPPO Reno: I-brand entsha ye-smartphone isemthethweni
I-OPPO Reno 5G: Isiphelo esitsha sophawu
Isiqingatha sabasebenzisi abakhetha iPixel 3 bavela kwi-Samsung